> Resource > Mac > Recuva Alternative for Mac
Recuva waxaa si balaadhan loo yaqaan barnaamij soo kabashada xogta qasban tahay inay u hayaan Windows PC. Mar kasta oo files yihiin tirtiray, formatted, kharribeen ama ka maqan your computer Windows ama warbaahinta saari karo, Recuva noqon kartaa Ololaha Nolol la qaababka ay u fududahay in la isticmaalo iyo gebi-free. Si kastaba ha ahaatee, Recuva waxaa kaliya loogu talagalay Windows PC hadda, dadka isticmaala Mac fursad u lahayn in ay u isticmaasho barnaamijkan awood badan oo lacag la'aan ah inuu ka soo kabsado ay xogta lumay ama la tirtiro leeyihiin.
Baahida ee Recuva u Mac waa weyn ee internet-ka. Inkasta oo runta waa: ma jirto Mac version rasmiga ah ee Recuva, oo waxaa jira ku dhawaad ​​jirin barnaamij lacag la'aan ah soo kabashada xogta Mac aad . Waa adag tahay in aad ka heli Recuva kale ugu waxtar u leh Mac ka utilities badan oo suuqa ugu jirta. Inkasta oo aad akhriska maqaalkan, waxaad heli doontaa 5 Recuva awood leh Mac kale oo.
Top 4: VirtualLab u MacOS X
Top 3: Boomerang Data Recovery Software u MacOS X
MagicCute Data Recovery for Mac waa barnaamij soo kabashada xogta sahlan Mac taas oo ka caawisa in aad ka bogsato xogta waayay tirtirka, formatting ama sababo kale. Barnaamijkan wuxuu taageeraa soo kabashada ee ka badan 2000 oo nooc file waana si buuxda u la jaan qaada HFS / NTFS, baruurta iyo FAT32.
1 Tani waa barnaamij si degdeg ah dib u soo kabashada oo u baahan xirfad gaar ah ama aqoon u lahayn;
2 MacgicCute waa codsi la qaadan karo in kuu ogolaanayaa inaad si loo soo dajiyo iyo waxa maamula ee ah drive dibadda adag;
3 Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa kun oo nooc file;
4 Waxaad u abuuri karaan disk gurmad image la qalab this.
1 Iyadoo iskaanka waa processing, aan aad u joojiso. Haddii kale iskaanka oo dhan waa la tirtiri doonaa.
Hel MagicCute Data Recovery for Mac
VirtualLab u MacOS X waa barnaamij sahlan in aad bixisaa aasaasiga ah Mac-kabashada xogta. Qalabkan waxaa loo takhasusay laba hababka soo kabashada, dib u soo kabashada file lumay iyo soo kabashada iPod. Waxaa isticmaala awood u inuu ka soo kabsado xogta ka mugga un-dhajinta, drive weerar, iyo sidoo kale firewire iyo USB.
1 Waxa aad bixisaa constructor weerar gaarka ah;
2 Volume kabashada caawisaa in aad ka bogsato xogta ka mugga dhaawacan ama un-dhajinta.
1 ma waxaad ka raadin kartaa file magacyada midna badbaadin baar natiijada.
Hel VirtualLab u MacOS X
Boomerang Data Recovery Software u MacOS X waa Mac qalab kale oo dib u soo kabashada xogta in ay la tacaalaan tiro balaadhan oo ah xaaladood khasaaro xogta ka tirtirka shil ah in formatting. Waa awoodaan inay ka bogsadaan tirtiray, formatted iyo waxyeelo files, iyo sidoo kale drive unmountable oo laga dhaqo.
1 interface An xad-dhaaf ah u fududahay in la isticmaalo in ka badbaadiyay aad waqti badan;
2 weerar soo kabashada iyo reconstructor kabanayso weerar xogta la iska istareexsan!
3 kabashada iPod awood u in aad ka bogsato iPod ku filan gudbiyo;
1 Barnaamijka waxaa kaliya ayaa bixiya scan caadiga ah. Ma aad heli kartaa "Deep Scan" aad drive;
2 Waxa aanu taageeraan noocyo badan file sida biilasha kale ee liiska ku sameeyo.
Hel Boomerang Data Recovery Software u MacOS X
MiniTool Mac Data Recovery waa qof ku taqasustay soo kabsaday xogta ka drive burburtay iyo jidh ahaan ama si macquul waxyeelo adag. Barnaamijku wuxuu aad bixisaa 4 hababka soo kabsado mudooyinka kala duwan soo kabashada xogta: Undelete Recovery, Recovery ah Barzakh, Burburay, Lost Recovery ah Barzakh, iyo Digital Media Recovery.
1 Waxa ay taageertaa qalab badan codsiyada kale ee suuqa, oo ay ku jiraan bixisaa, Sata, SCSI, USB disk adag, kaadhka xusuusta, flash USB drive oo dheeraad ah;
2 Marka aad wadid si macquula ama jir ahaan u burburay, MiniTool leeyahay faa'iidooyinka ah kabsaday xogta aad.
1 Waxa aanu u taageeraan nidaamka HFS iyo file exFAT;
2 Waxa aanu taageeraan Mac OS ka hooseeya OS X 10.5;
3 iskaanka waa run ahaantii mid gaabis ah.
Hel MiniTool Mac Data Recovery
Wondershare Data Recovery for Mac Waa mid ka mid ah Recuva ugu waxtar leh oo awood u Mac taas oo ka caawisa in aad ka bogsato xogta Mac si aad u awood badan oo si fudud. Barnaamijka waxay ku siinayaan awood leh soo kabashada xogta engine, iyo sidoo kale interface fudud iyo mid-stop kabashada caawisaa in aad ka bogsato xogta Mac effortlessly. Waxa ay u ogolaataa in aad ka bogsato files lumay labada qalabka Mac iyo sidoo kale qalabka lagu kaydiyo dibadda, halka barnaamijyo badan Mac kabashada xogta soo kabsado kaliya xogta laga warbaahinta saari karo.
1 utility waxay ku siinayaan la qaabab badan soo kabashada, dib u soo kabashada file lumay, soo kabashada file cayriin, soo kabashada xijaab, iyo soo-kabsashada xogta iPhone. Oo dhan waxay leeyihiin shaqo scan qoto dheer.
2 Faylal ay ka heleen by codsiga waxaa loo qori doonaa qaybaha cad sida waraaqaha, sawirada, videos, music, emails, iyo archives, ama galalka file.
3 Waxaad ku xasil karo dib u soo kabashada marka aad files aad ka heli, iyo sidoo kale badbaadin dhowr natiijo si loogu isticmaalo ee soo socota markii;
4 Wondershare ayaa file awood u eegis ugu xooga badan suuqa, waxaad ku eegaan karo sawirada, waraaqaha, emails iyo archives, iyo sidoo kale daawato videos qaar ka mid ah iyo dhegayso files audio.
5 yaab iPhone / iPad / iPod function soo kabashada xogta qalab this caawisaa in aad ka bogsato SMS lumay, xiriirada, sawiro iyo faylasha kale oo badan oo ka Lugood gurmad file aad Mac;
6 Barnaamijka waxaa si buuxda la jaan qaada HFS +, HFSX, FAT16, FAT32, exFAT iyo nidaamka file NTFS.
1 xawaaraha iskaanka waa kaliya celcelis ahaan ku jira liiska.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta la Recuva u Mac: Wondershare Data Recovery for Mac
Waxaad si fudud u soo kaban karto xogta aad badiyay Mac in 3 tallaabo:
Tallaabada 1 Waxaad u baahan tahay in ay doortaan hababka soo kabasho ka dib markii ay codsiga aad Mac.
Tallaabada 2 Haddii aad doorato "lumay File Recovery" mode, waxaad dooran kartaa drive ama mugga aad Mac oo guji "Scan" button in aynu baaritaano barnaamijka faylasha laga badiyay waxaa ku.
Tallaabada 3 Markaas oo keliya u baahan tahay in aad dooratid in aad files lumay oo guji "Ladnaansho" dib u soo ceshano oo waxaan iyaga ku badbaadin si aad Mac ama warbaahinta kale lagu kaydiyo.